Manatevin-daharana ny Fitokonana ho an’ny Toetr’andro ny tanora any Japana · Global Voices teny Malagasy
Manana anjara andraikitra amin'ny fiantraikan'ny toetrandro i Japana
Voadika ny 26 Oktobra 2019 4:21 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Español, Ελληνικά, 日本語, 繁體中文, English
Fitodian'arintany ao amin'ny orinasa mpamokatra herinaratra Hokuriku Denryoku, Tsuruga, Fukui. Saripikan'i Nevin Thompson, CC BY 3.0
Nahatsikaritra zavatra hafahafa i Arao Hinako rehefa nandeha nilomano tao amin'ny Ranomasina anatin-tany Setouchi niaraka tamin'ny zanaky ny mpiray tam-po aminy.
“Raha ny tokony ho izy, rehefa mijanona na dia vetivety ao amin'io ranomasina ianao, dia manomboka mivadika manga (avy amin'ny hatsiaka). Saingy tamin'ity fahavaratra ity, mafana sy mando ny toetrandro, ary mafana tsy mahazatra ny rano, “hoy ity mpikatroka momba ny tontolo iainana sady mpaka sarimihetsika ity nitantara indray.
Mpikarakara hetsika ifotony za-draharaha any Japana ho an'ny 350.org, fikambanana iraisam-pirenena miara-miasa amin'ireo mpikatroka mpianatra avy ao amin'ny Fridays for Future Tokyo (FFF) – fikambanana Japoney amin'ny hetsika mitondra anarana toy izany an'ilay tanora Soedoà Greta Thunberg i Arao- mba hitazonana ny fitomboan'ny maripàna manerantany ho ambanin'ny 2 degre Celsius.
Nahatsikaritra i Arao sy ny hafa fa nanana ny anjarany tamin'ny vokatry ny fiovan'ny toetr'andro i Japana.
Tsy ny ranomasina any amin'ny toerana toa ny Ranomasina anatin-tany ihany no mafana ny rano, fa nanosika hatrany ny governemanta eo an-toerana hangataka fanampiana avy amin'ny Tafika Fiarovan-tena Japoney ny orambe tsy mbola nisy hatrizay sy ny fihotsahan'ny tany aterak'izany mandritra ny vanim-potoanan'ny rivo-doza isaky ny volana aogositra, ka ao anatin'izany ny fanampiana amin'ny famindrana ireo mponina 870000 taorian'ny oram-be tao atsimo-andrefan'i Japana tamin'ny Aogositra 2019. Fantatra fa hamely an'i Japana amin'ny 12 Oktobra ny rivo-doza Hagibis rivo-doza mahery vaika.
Manomboka mandray andraikitra ny vahoaka Japoney. Tamin'ny 20 septambra 2019, mpikatroka efa ho 5 tapitrisa tao amin'ny firenena 115 eran'izao tontolo izao no nanatevin-daharana ny Fitokonana Manerantany ho an'ny Toetrandro, tanora Japoney mpanao fihetsiketsehana 2 500 teo ho eo no nanao diabe niainga tao amin'ny Oniversiten'ny Firenena Mikambana ao amin'ny lalana Omotesando ao Tokyo ho any amin'ny toerana fiampitana malaza Shibuya, miantsoantso teny filamatra manoloana ireo mpandeha an-tongotra mitazana ary hita mazava fa gaga.
Nankany amin'ny diabe aho mba hanao tatitra ho an'ny gazetiboky i-D. Efa ho olona 800 no niseho. Mpianatry ny lisea teny an-dalana hody avy nianatra ny ankamaroany
Iwano Saori, 16 taona, mpianatra ao amin'ny liseam-panjakana any Tokyo sady mpikambana ao amin'ny ekipan'ny famoronana Fridays For Future Tokyo nanazava ny fanapahan-keviny sy ny mpiara-mianatra aminy mba hanomboka ny fandraisana anjaran'i Tokyo amin'ny diabe manerantany ho an'ny toetr'andro amin'ny 5 hariva, amin'ny firavan'ny sekoly, na dia ireo mpianatra any amin'ny faritra hafa eran'izao tontolo izao aza nikarakara fitokonana ihany koa: “Tsy afaka mivadika amin'ny vahoaka izay mandoa vola amin'ny fianarako aho,” hoy i Iwano.
“Tsy manana teny sahaza amin'ny teny japoney ho an'ny” fiovan'ny toetr'andro “izahay, hoy i Kajiwara Takuro, mpianatry ny oniversite izay niara-nikarakara ny diabe. “Fa ampiasaina kosa ny teny somary manjavozavo mahavariana hetsika-toetrandro (異常 気 象),” hoy i Kajiwara.
Amin'ny maha mpampiantrano ny Kyoto Protocol nosoniavina tamin'ny taona 1997 – fifanarahana voalohany manerantany nametraka tanjona amin'ny fampihenana ny karbonina – ary ny G20 tamin'ity taona ity – izay nanolotra fifanarahana hampihenana ny fako plastika any an-dranomasina – indroa izao i Japana no loha laharana amin'ny fitarihana hetsika momba ny toetr'andro.
Saingy na dia eo aza ny porofon'ny fiantraikan'ny fiovan'ny toetr'andro any Japana, dia tara ny fandraisan'ny governemanta foibe andraikitra manoloana ny olana maika momba ny toetr'andro izay iezahan'i Kajiwara, Arao sy ny hafa mafy mba hisarihana ny saina.
Ny hita kosa, mampiroborobo kokoa ny orinasa mpamokatra herinaratra amin'ny arintany sy etona mamokatra GHG bebe kokoa manerana izao tontolo izao i Japana, manondrana ny teknolojia hananganana azy ireo any amin'ny firenena toa an'i Vietnam sy India. Tamin'ny voalohandohan'ny volana Oktobra, andro vitsy taorian'ny fitokonana momba ny toetr'andro, nahazo ny fifanarahana hanangana orinasa mpamokatra etona voajanahary voadio any Mozambika mitentina 3,73 miliara dolara, izay anisan'ny fiarahamiasan'ireo mpiantsehatra lehibe eo amin'ny solintany sy etona izay ahitana ny Exxon Mobil ny JCG Holdings, manam-pahaizana Japoney momba ny injenieran'ny famokarana.
Tamin'ny taona 2018, nametraka drafitra angovo vaovao izay mikendry famokarana herinaratra 22-24 isanjato avy amin'ireo loharano azo havaozina amin'ny taona 2030 i Japana. Fanitsiana ny paikady taona 2002 ity drafitra ity, izay ny ampahany tamin'ny tanjona tamin'izany ihany no tratra, araka ny filazan'ny Ministeran'ny Indostria, Varotra ary Tontolo iainana. Vokatr'izany, dia tsy nasaina hiresaka tamin'ny Fihaonamben'ny Firenena Mikambana Manerantany farany momba ny Toetr'andro tany New York i Japana tamin'ny 23 Septambra 2019.
Mahatakatra tsara ny fanamby atrehin'ny fitondram-panjakana manerana izao tontolo izao ireo tanora mpikatroka japoney rehefa miezaka mampiroborobo ny fitomboana ara-toekarena ary misoroka ny sorona ara-tontolo iainana.
Nandoko ny volony ho maintso i Sasaki Isao, 16 taona, mpianatry ny lisea sady mpikatroka mafana fo mpiaro ny tontolo iainana ho fanohanana ny fitokonana voalohany ho an'ny tontolo iainana tamin'ny volana martsa 2019. Nilaza tamin'ny Global Voices momba ny dian'ny sekoliny tany amin'ny toeram-pambolena iray tany Borneo, Malezia efa elaela i Sasaki, izay nahitany mivantana ireo mpiasa mandripaka ala mba hambolena vokatra – fandripahana sahala amin'ireo izay nahatonga ny afo goavana vao haingana tany amin'ny alan'i Amazona.
“Ny zavatra mahasorena dia [nahatakatra] ny fomba fihevitr'ireo mpiasa ireo ihany koa aho. Manome antoka ny fiveloman'izy ireo ny fambolena, “hoy i Sasaki.
Misy ny marika fa mety ho lasa malaza eo amin'ny tontolon'ny rafitra goavana ara-bola Japoney, izay ivon'ny tsikera mahery vaika avy amin'ireo mpikatroka ny toetr'andro ny andraikitra ara-tontolo iainana.
Tamin'ny fiandohan'ny volana Oktobra 2019, lasa banky Japoney voalohany mamoaka ilay antsoina hoe “adidy maitso”, izay nampiasaina hamatsiam-bola ireo tranobe ambany karbonina sy angovo azo havaozina ao Aostralia i Mitsubishi UFG . Saingy natahotra i Sasaki fa lasa malaza eo amin'ireo mpampiasa vola izany andrana izany“ satria ny hafa rehetra manao azy ho lamaody.”
Lehilahy iray izay toa afaka manova ny zava-bita ratsy nataon'ny governemanta tamin'ny tontolo iainana i Koizumi Shinjiro, minisitry ny tontolo iainana vaovao any Japana ary zanakalahin'ny praiminisitra malaza teo aloha.
Nilaza i Koizumi fa mila “tsara tarehy, mahafinaritra sy milay” ny ady amin'ny fiovan'ny toetr'andro.” Ho hita eo raha mahavita mandrehitra ny afon'ny fitiavana ny tontolo iainana eo amin'ireo mpanjifa 126 tapitrisa any Japana izy na tsia.